Madaxweyne Xasan “Waxaan ku rajo weynahay in 2015 horumar laga gaaro midnimada Soomaaliya” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
22nd December 2014 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inuu rajeynayo in sanadka soo socda ee 2015 horumar laga gaaro Midnimada Soomaaliya.
Madaxweynaha oo warfidiyeenka la hadlay, kadib markii uu shalay kasoo laabtay dalka Jabuuti oo uu kula soo kulmay madaxweyanaha maamulka gooni u goosadka ee Somaliland, Axmed Siilaanyo ayaa xusay in wahadalka labada dhinac lagu sii ambaqaadi doono magaalada Istanbuul ee dalka Turkia.
“Waxaan ku heshiinay in labada dhinac kusii wada hadlaan magaalada Istanbuul ee dalka Turkiga, halkaasoo marar hore lagu shiray, waxaana rajeynayaa in sanadka 2015 horumar wanaagsan laga gaaro midnimada Soomaaliya” ayuu madaxweyne Xasan weriyaasha ugu sheegay Muqdisho.
Madaxweynayaasha Somaaliya iyo Somaliland ayaa shalay dalka Jabuuti ku kala saxiixday heshiis ka kooban 6 qodob kadib markii uu dhexdhexaadiyey madaxweynaha Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle, taasoo irridda u frutay sii socoshada wadahadalkii labada dhinac oo hakad galay.